Cali Yare Cali oo weerar afkaa ku qaaday Qoor Qoor | dayniiile.com
Home WARKII Cali Yare Cali oo weerar afkaa ku qaaday Qoor Qoor
Cali Yare Cali oo weerar afkaa ku qaaday Qoor Qoor
HAMBALYO:- Reer Koonfur Galbeed Hambalyo, guushaan waxaad ku gaarteen midnimadiinna, ismaqalkiinna iyo hoggaankiina, sidoo kale Hambalyo hordhac ah Xildhibaan Sareedo oo isla Beri Baydhabo lagu markale lagu dooran doono.
TACSI: Waloow aan ka mid ahaa tiro dad tiroyar oo markii horaba wanaag u rajeysay ismuujintiisii mashruuca Baydhabo hadana,Madaxweynaha Galmudug waxaan uga tacsiyadeydanaa musiibada iyo haziimada Siyaasadeed ee uu caawa Baydhaba la seexanayo.
Waxaa jira eray-bixin cajiib ah oo aan ka bartay Danjire Yusuf Garaad taas oo ah ( Is-been-farriin) waxaa kale oo iyana jirta oo taas la macna ah kalmadda (ismaqiiq) natiijada uu Madaxweynaheenna Galmudug caawa dhaxlau waa mid ka ta timid safarkii Is-Been-farriinka iyo ismaqiiqa ahaa ee ka dhashay labo Whatsup Call oo la isku camiray iskuna maray Muqdisho-Dhuusamareeb-Baydhabo.
Reer Baydhabo iyagu guushooda in ay xaqiijiyaan ayay tabartooda iskugu geeyeen waqtina iskama galin hardanka Baydhabo ku dhexmaray Maxamed Xuseen Rooble iyo Madaxweyne Qoorqoor.
Previous articleWFP oo kordhisay kaalmada la siinayo bulshada Galmudug
Next article Xildhibanoow Iska ilaaliya khatarta ?
Dowladda Masar oo camaareysay weerarkii Al-Shabaab ee degaanka Ceelbaraf